जीवनजल त पाएनन्, न्याय के पाउलान्! – AayoMail
जीवनजल त पाएनन्, न्याय के पाउलान्!
आयाेमेल संवाददाता २०७७ असार १४ गते १:१९
राजु सदाले प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरको आइसोलेसनमा छट्पटिएर प्राण त्यागे। क्वारेन्टाइन बसेको केही दिनपछि राजुलाई झाडापखाला लागेको थियो। झाडापखाला र वान्ता भइरहेकै बेला राजुको आरडिटी रिपोर्ट पोजेटिभ आयो।
आरडिटी रिपोर्ट पोजेटिभ आउने सबैलाई क्वारेन्टाइनबाट आइसोलेसन पठाइँदैन। तर, राजुलाई जनकपुरस्थित प्रादेशिक अस्पतालको आइसोलेसनमा पठाइयो। राजुसँगै भारतको चेन्नईबाट फर्केका अरुण सदालाई पनि प्रादेशिक अस्पतालको आइसोलेसनमा भर्ना गरिएको थियो।
आइसोलेसनसम्म आइपुग्दा पनि राजुलाई झाडापखाला र वान्ताले सताइरहेको थियो। छिनछिनमा उनी अचेतसमेत भइरहेका थिए, आइसोलेसनभित्र।
चेन्नईदेखि आइसोलेसनसम्म सँगै रहेका साथी अरुणले बेडमुनि छट्पटाइरहेका राजुलाई सम्हाल्ने प्रयासमात्र गरेन। उनले डाक्टरलाई समेत पटक–पटक फोन गरे। तर, समयमै डाक्टर आइदिएनन्। अस्पताल र चिकित्सकको लापरबाहीले आइसोलेसनभित्र ज्यान गएको राजुका आफन्तहरूले आरोप लगाएका छन्।
‘पटक–पटक डाक्टरलाई फोन गरे, चार पाँचपटक फोन गरेपछि आफूलाई मन लागेको बेलामात्र आइदिए,’ उनी भन्छन्, ‘मेरै अगाडि राजुले छट्पटिएर प्राण त्याग गरिदिए।’
हरेक घटनापछि पीडित परिवारलाई रुपैयाँ दिनेबाहेक प्रदेश सरकारले अरु केही गर्न नसकेको जनकपुरवासीको आरोप छ।
आइसोलेसनभित्रै राजुको ज्यान गएपछि प्रदेश सरकारले परिवारलाई ५ लाख क्षतिपूर्ति र घटनाको छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति बनाएको छ। समितिलाई सात दिनभित्र प्रतिवेदन दिन भनिएको छ।
आइसोलेसनमै छट्पटिएर राजुको मृत्यु भएपछि अहिले प्रदेश सरकारको चर्को आलोचना सुरु भएको छ।
प्रदेश सरकारमातहत रहेको प्रादेशिक अस्पतालको आइसोलेसनमा मृत्यु भएका राजुको परिवारले न्याय पाउनेमा आमनागरिक आश्वस्त हुनसकेका छैनन्। हरेक घटनापछि पीडित परिवारलाई रुपैयाँ दिनेबाहेक प्रदेश सरकारले अरु केही गर्न नसकेको जनकपुरवासीको आरोप छ।
प्रादेशिक अस्पतालभित्र पटक–पटक दोहोरिने यस्ताखाले घटनाका दोषीलाई कारबाही नगरिएसम्म कदापि सुधार हुन नसक्ने तरुण दल धनुषाका उपसभापति राकेशविक्रम साह बताउँछन्।
‘बेडमुनि छट्पटिएर ज्यान गएको भिडियो नै सार्वजनिक भएको छ,’ साह भन्छन्, ‘भिडियोमा कुनै डाक्टर पुगेको देखिँदैन, सरकारले कारबाही गर्ने कि नगर्ने?’
हरेक घटनापछि पीडित परिवारलाई रुपैयाँ बाँडेर सरकार चूपचाप बस्ने गरेको उनको भनाइ छ। ‘सामाजिक विकास मन्त्रालयमातहत रहेको प्रादेशिक अस्पताललाई व्यवस्थित गर्न नसक्ने मन्त्रीले राजीनामा गरे हुन्छ,’ साह भन्छन्।
नेकपाका युवा नेता सन्जिव झा १० रुपैयाँको जीवनजल उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकारले राजुको असामयिक मृत्यु हुनुमा देखिएका दोषीहरूलाई कारबाही गर्नेमा शंका रहेको बताउँछन्। ‘राजुको झाडापखालाबाट मृत्यु भएको छ, समयमै उपचार भइदिए ऊ बाँच्थ्यो होला, तर सरकार र अस्पतालको लापरबाही देखिएको छ,’ झा भन्छन्।